Semalt - Agence Digital Renown World
Semalt dia maso nomerika malaza eran'izao tontolo izao izay manokana amin'ny Search Engine Optimization sy Website Analytics. Manomboka amin'ny tsindrio eo amin'ny tranokalan'izy ireo dia mazava fa manana ny fahatakarana lalina ny fomba hisarihana ny saina amin'ny Internet izy ireo miaraka amin'ny votoatiny voafaritra tsara, antso mivantana amin'ny hetsika ary fomba fampiasa tsara. Miaraka amina ekipa matihanina efa nahay tamin'ny fiteny maro dia mora ny mahita ny antony ananan'ny Semalt ny hevitra tsara an-jatony sy valiny avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao. Oh, ary tsy hadinonao ny miarahaba ny Turbo ny Turtle!
Alohan'ny hitsidihantsika ny paosiny dia andao horavana izay rehetra ataony.
Ny Search Engine Optimization (fantatra ihany koa amin'ny hoe SEO) dia mampitombo ny fivezivezena eo amin'ny tranokalanao amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny fahitana ny pejinao eo amin'ny Search Engine. Mba hisehoana ao amin'ny Search Engine Result, mpampiasa dia mila manondro Index. Ny fanondroana dia ny fizotran'ny fikarohana ao amin'ny Search Engine manangona vaovao miaraka amin'ny Spider (fantatra koa hoe Bot na Crawler) ka hahafahany mandamina ny votoatin'ny zava-misy amin'ny rakitra rehetra. Mba hahitana ny Spider anao hahita ny pejinao, mila mahita ny rohy mankany aminao izy ireo rehefa mandinika tranonkala iray hafa. Ny tsikera izany dia antsoina hoe Backlinking.
Raha vao mahita ny pejinao ny Spider dia hanangona ireo fampahalalana rehetra izay mety ho hitanao izy mandra-pahatongana azy ao amin'ny tranokalanao. Ny Search Engine avy eo dia hanome ny votoatinao misy lanja, izay mety hanampy na handratra ny toeranao SERP (Search Engine Results Pages). Raha misy Search Engine manolotra ny pejinao, dia hitsara ireto manaraka ireto:
Fiteny: Ny mpamaky ve afaka mamaky ny atiny?
Hafa misy votoaty: Misy ifandraisany amin'ny teny fikarohana ve ny atiny?
Takelaka amin'ny vatana: Manao ahoana ny halavan'ny atontan-dahatsoratra amin'ny teny fikarohana?
Lohateny Pejy: Inona no dikan'ilay hevitrao?
Sary sy kisary: Manohana ny votoatinao ve ny fitaovana hita maso?
Toerana: Miankina amin'ny toerana misy ny votoatinao ve?
Miaraka amin'ny SEO rehetra nilahatra araka ny tokony ho izy dia tokony hanana loharano marim-pototra mety hisintona mpanjifa mety amin'ny alàlan'ny tranokalanao ianao. Saingy ahoana no ahafahanao milaza amin'ny farany fa efa mahatratra ny mpihaino azy ny tranokalanao? Tsy izany ihany, fa ahoana no ahafantaranao raha manao ny fomba itiavanao azy ireo ny mpihaino anao? Mazava ho azy fa afaka mijery ny tatitra momba ny varotrao isika ary mitsara izany. Saingy ny tatitra momba ny varotra rehetra dia milaza aminao hoe ohatrinona ny vola nataonao. Raha tena tianao ny hahatakatra ny fandraisan'ny mpanjifa ny tranokalanao, mila mandinika lalina ao amin'ny programa Web Analytics ianao.
Ny tranonkala Web dia ampiasaina handrefesana sy hanangonany ary famakafakana ireo tatitra miaraka amin'ny faniriana hahatakatra ny fahazaran'ny mpihaino anao mba hahafahanao manara-maso tsara ny tranokalanao. Ireo programa ireo dia hanome anao fampahalalana lehibe momba ireo entana manaraka ireto.
Isan'ny isan'ireo fitsidihana tsy manam-paharoa
Isan'ny isan'ny famangiana miverimberina
Izany fampahalalana be dia be hivaingana! Saingy zava-dehibe aminao ny manana izany satria hanampy anao amin'ny fomba feno ny fanatanterahana ny tranokalan'ny tranokala. Miaraka amin'ny Web Analytics, afaka mandray fanapahan-kevitra tsara momba ireto manaraka ireto ianao:
Manapa-kevitra hoe iza ireo teny fanalahidy mitarika fifamoivoizana amin'ny tranokalanao.
Manapa-kevitra hoe inona ny vokatra manangona izay tena mahaliana indrindra.
Ny fiovan'ny vidiny miorina amin'ny fifandraisan'ny mpanjifa.
Tadiavo fanatsarana toerana.
Mametraha ny votoatiny raikitra amin'ny demografika.
Na dia azo atao aza izany rehetra izany, dia mila fotoana ho anao tanteraka ny orinasanao. Toy ny amin'ny tena fiainana, ianao hisintona kokoa ny mpivarotra varavarankely mihoatra noho ny tena mpanjifa. Noho izany dia mila miezaka mafy indrindra ianao mba hisintona olona maro araka izay tratra. Ary izany no antony tokony hanakaranao an'i Semalt!
Raha mijery ny pejin'ny tranga ianao dia nanampy orinasa an-jatony manerantany mba hahazo isa isa-tsindry ilaina hahazoana tombony. Ny tranga tsirairay dia manana rohy izay miditra amin'ireto:
Fampandrenesana ho an'ny mpanjifa
Talohan'izay sy aorian'ny Metric Sheets
Araka ny hitanao amin'ny clip natolotro etsy ambony dia nampitombo ny isan'ireo mpitsidika ireo isam-bolana isa-bolana avy any amin'ireo mpampiasa 114 ho an'ny mpampiasa 777 i Semalt. Izany no in-15 isanjatoan'ny mpampiasa azy teo aloha! Io no nolazain'ny mpanjifa momba ny valiny:
Ary raha tsy ampy ny famerenana an-tsoratra sy ny isa mafy dia manana pejy iray natokana ho an'ny fandinihana video ihany koa i Semalt. Ireo tsikera ireo dia avy amin'ny mpanjifa mahafa-po manerana izao tontolo izao!
Ka ahoana no fomba hanomezan'i Semalt anao valiny mitovy? Ny zavatra voalohany azonao atao dia ny manararaotra ny fanolorana ny fitsarana azy ireo izay nataon'i Yavuz avy amin'ny surgerytr.com. Raha vantany vao tsindrio ny Semalt.com ianao dia hahita bara iray izay hamakafaka ny tranonkalanao eo noho eo. Mba hahitana ity tatitra ity, ny ataonao rehetra dia ny mamorona kaonty. Ity tatitra ity dia hamintina ireo valiny hita tao amin'ny pejin-tranonkalanao ary manolotra fonosana iray izay hanampy hampiakatra ireo valiny ireo. Ireo fonosana ireo dia misy ny AutoSEO , FullSEO , ary Analytics.
AutoSEO dia manome anao ireto fitaovana manaraka ireto:
Eo amin'ny pejy Optimization
Ireo no sakan-trano ilaina amin'ny fametrahana ny fampielezana SEO mahomby! Na dia mianatra SEO aza ianao rehefa mandeha, ny fitaovana azonao eo amin'ny tranokala Auto SEO dia mora ampiharina amin'ny tranokalanao. Ity no fonosana lafo vidy indrindra, haingana sy mahomby izay atolotry ny vola natolotry Semalt.
Azonao atao ny mividy fitsarana 14 andro mandritra ny 99 cents. Aorian'izany dia afaka mividy kitapo isam-bolana ianao amin'ireto vidiny manaraka ireto:
1 volana ho an'ny $ 99
3 volana ho an'ny $ 267
6 volana ho an'ny $ 504
1 taona ho an'ny $ 891
Ny fonosana FullSEO dia manana iray amin'ireto matihanina efa vita tamin'ny Semalt ireto:
Famandrihana ny tranokala
Ny fanohanana sy ny dinika
Miaraka amin'ity tetika ity, tanjon'ny Semalt ny hanosika ny tranokalanao hatrany amin'ny faran'ny SERP. Iray amin'ireo matihanina efa vita dia nomena ny pejyo mba hahafahan'izy ireo mampiasa ny loharanon-tanana rehetra mba hahombiazan'ny pejy ataonao. Araka ny hitanao etsy ambony miaraka amin'ny surgerytr.com dia afaka mitsambikina tsara ao amin'ilay pejy izy ireo ary manomboka miasa ny majika avy hatrany.
Ary raha tsy te hahalala bebe kokoa momba ny matihanina ianao, dia afaka mahita ny sarin'izy ireo manerana ny tranokala. Ohatra, Yana Shafarenko (manam-pahaizana momba ny SEO) sy Natalia Khachaturyan (Strategist Content) dia aseho ho "fiambenana ny laharanao" ao amin'ny pejy voalohan'ny tranonkala Semalt. Ireto ambany ireto ny lisitry ny zava-bitan'izy ireo izay azony tamin'ny niasa ho an'ny Semalt.
Ny manampahaizana maromaro aminy koa dia manoratra lahatsoratra ho an'ny bilaogin'i Semalt. Vladislav Polikevych (Copywriter), Olga Pyrozhenko (Marketing Marketing), ary Eugene Serbin (Head of SEO) dia nanoratra lahatsoratra maromaro momba ny fironana SEO amin'izao fotoana izao ary manararaotra ny tsenanao. Ary efa nolazaiko ve fa manana pejy 26 pejy amin'ny lahatsoratra bilaogy izy ireo? Miaraka amin'ny lahatsoratra dimy isaky ny pejy sy lahatsoratra roa amin'ny farany, izany dia lahatsoratra 127 (azo antoka izao) fa misy MAIKA! Eo anelanelan'ny fijoroana ho vavolombelona ataon'ireo mpanjifa sy ireo lahatsoratra omeny maimaim-poana ao amin'ny bilaoginy, manana loharano betsaka azonao entina ilazana ianao alohan'ny handraisanao fanapahan-kevitra hividy fonosana feno SEO an'ny Semalt.
Ny fonosana Full SEO dia miovaova eo anelanelan'ny mpanjifa, noho izany, indrisy, tsy afaka manome vola mivantana ho anao aho. Saingy araka ny voalazako etsy ambony, ny habetsaky ny famerenam-po tsara sy ny fanentanana mahomby dia miresaka momba ny lanjan'ny fonosana feno SEO feno an'i Semalt. Manolotra fihenam-bidy izy ireo raha toa ka misoratra anarana famandrihana isam-bolana:
3 volana manome 10% fihenana
6 volana manome 15% fihenana
12 volana manome 25% fihenana
Ary farany, misy ny fonosan'ny Web Analytics ao amin'ny Semalt, izay misy ireto serivisy ireto:
Check rangking site
Fidio ny fahitana tranokala
Hikaroka ny tranonkala mifaninana
Fantaro ny fotoana fanararaotana eo amin'ny pejy
Ity ilay fonosana izay milaza aminao raha ny asanao rehetra dia mitarika anao hahomby na manambara fa manana asa bebe kokoa ianao. Raha tsy misy izany fahalalana izany dia tsy afaka manosika ny tranokalanao any an-tampon'ny SERPs ianao, na mijanona eo amin'ny tampony raha efa eo ianao. Ny fahalalana dia hery. Ary amin'izany hery izany dia afaka manao ny sasany amin'ireto:
Kisary ny fifaninanana hahitanao izay ataony
Ampitahao amin'ny fikarohana ataonao ny teny fanalahidy
Mahita tranga ao anatin'ny tranonkalanao
Momba ny vidiny, manolotra fonosana misy fetran'ny teny fonosana sy fonosana izy ireo. Toy izao ny fijeriny:
$ 69 / volana ho an'ny teny fanalahidy 300, tetikasa 3 ary tantaram-piainan'ny 3 volana
$ 99 / volana ho an'ny teny fanalahidy 1.000, tetikasa 10 ary tantaran'ny toerana iray
$ 249 / volana ho an'ny teny fanalahidy 10,000, tetikasa tsy misy fetra ary tantaram-piainana tsy manam-petra
Raha misoratra anarana mandritra ny volana maromaro ianao dia afaka mamonjy ireto manaraka ireto:
Eo anelanelan'ny fijerena tsara rehetra nasehon'i Semalt tamim-pireharehana ny tranonkalany, ny bilaogy sy ny fahazoan-dàlana ho an'ireo matihanina marobe efa nahavita azy ary ny vidiny lafo vidy, dia mora ny mahita ny antony maha-iray amin'ireo masoivoho nomerika mahay indrindra eto an-tany ny Semalt. Avy amin'ny fijerena ny tranokalany ihany no ahitanao fa tena mikarakara izay ataony amin'ny SEO sy Analytics izy ireo